Whomnye / gịnị ka ị na-enupụ? Ọdịdị nke ike ndị America? Ee e, nhazi nke ike French? Ee e, nhazi nke ike Bekee? Mba: yabụ kedu ihe ọ bụ? Nke a bụ nhazi mba ụwa nke ike ndị ọdịda anyanwụ
Site na: KongoLisolona: August 5, 2019 10: 01 Enweghị asịsa
Ihe owuwu nke gụnyere ma ndi America, French, English, Belgium na European. Mba ndị a, nke bụbu ndị Black / Africa chịkọbara ọchịchị, mejupụtara nnukwu ọgbakọ…	GỤKWUO
Melanesia: ndị otu a nwere DNA pụrụ iche kpamkpam n'ụwa ... (VIDEO)
Site na: KongoLisolona: January 10, 2017 06: 06 Enweghị asịsa
Ndị Melanesian bi n'otu mpaghara na ugwu Australia, na Papua New Guinea. Nyocha nke DNA ha edoberela ihe ịtụnanya dị mma maka mpaghara sayensị ...	GỤKWUO